27 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 301 Views စာ0မှတ်ချက် 60271 ပင်မရင်ပြင်, 60282 မီးသတ်စစ်ဌာနချုပ်ယူနစ်, City, VIP အမှတ်နှစ်ချက်, Lego, Lego CIty, Lego City Adventures ကို, Lego VIP, LEGO.com, VIP, vip အချက်များ, VIP ဆုများ
နှစ်ခုအပေါ် VIP နှစ်ဆဂိုးသွင်းဖို့အချိန်နီးပါးတက်သည် Lego CITY ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းအပါအဝင်အစုံ 60271 ပင်မရင်ပြင်.
စာရင်းသွင်းသည် LEGO.com 'တွေ့ရန်ခက်ခဲ' သည်၊ ပြန့်ကျဲနေသော 1,517-piece Lego City စွန့်စားမှုများသတ်မှတ်ခြင်းသည်ယူကေရှိ Argos အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒါကတတိယနေရာမှာရှိနေသေးတယ်arty လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ နှစ်ဆ VIP အချက်များဖြင့်ထိရောက်သော ၁၀% လျှော့စျေး (အနာဂတ်ဝယ်ယူမှုနှင့်သီးသန့်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်သုံးစွဲရန်ငွေပြန်အမ်းခြင်းပုံစံ) သည်ရရှိသည့်အတိုင်းကောင်းနိုင်သည်။
တစ် ဦး နှင့်အတူ city ခန်းမ, Diner နှင့်ဖျော်ဖြေပွဲဇာတ်စင်, 60271 ပင်မရင်ပြင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ limo၊ လမ်းရထား၊ စီးနင်းသောထွန်စက်နှင့်အသေးစားဓာတ်ပုံ ၁၄ ခုပါဝင်သည်။ ယူကေတွင်ပေါင် ၁၆၉.၉၉ ဖြင့် ၀ ယ်ပြီးဇူလိုင် ၃၁ ရက်မတိုင်မီအထိ ၀ ယ်ယူလျှင်သင့်အားစုစုပေါင်း VIP ရမှတ် ၂,၇၂၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဘောက်ချာများတွင်ပေါင် ၁၇ နှင့်နောက်ဆက်တွဲများဆီသို့တင်ရန်ဖြစ်သည်။
အခြား Lego CITY ဒီလမှာ double-VIP တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့သတ်မှတ်ထားတာကပိုပြီးကျိုးနွံစွာဈေးသက်သက်သာသာဖြစ်ပါတယ် 60282 မီးသတ်စစ်ဌာနချုပ်ယူနစ်, £ 380 များအတွက် 49.99 အပိုင်းပိုင်းအတွက်အထုပ်။ ဒါကတော်တော်မတ်စောက်တဲ့စျေးနှုန်း per-part အချိုးအစားသည်နှစ်ဆ VIP အချက်များကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှုတွင်ထည့်သွင်းရန် ပို၍ သွေးဆောင်မှုဖြစ်စေသောအရာဖြစ်စေသည် Lego မင်းဘဝမှာပန်ကာ) ။
သြဂုတ်လတွင်နှစ်ကြိမ် VIP ကုသမှုပေးသောနောက်ထပ်စုံနှစ်စုံကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည် LEGO.com အခု သင်သဘောတူညီမှုကိုအများဆုံးပြုလုပ်ရန်ဇူလိုင် ၃၁ ရက်စနေနေ့အထိဖြစ်သည် 60271 ပင်မရင်ပြင် နှင့် 60282 မီးသတ်စစ်ဌာနချုပ်ယူနစ်.
← LEGO သည်၎င်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသစ်နှင့်ပြissuesနာများရှိနေသည်
Lego Marvel 76193 The Guardians 'Ship review - စူပါဟီးရိုးခေတ်များအတွက် UCS ကိုသတ်မှတ်သည် →